अर्घाखाँची दुर्घटनाः मृत्यु हुने एकको सनाखत, दुई घाइतेको अवस्था गम्भीर | Machhapuchhre News | माछापुच्छ्रे न्युज
२० असोज, बुटवल । अर्घाखाँचीको नरपानीमा जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको घटनास्थलमै मत्यु भएको छ । ६ जना घाइते भएका छन् ।
घाइतेमध्ये २ जनाको अबस्था गम्भीर छ । कपिलवस्तुको गोरुसिंगेबाट सन्धिखर्क जाँदै गरेको लु १ ज ४३२९ नम्बरको जीप सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर–६ नरपानी नजिकै सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खसेको थियो । घटनामा मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको ढाकाबाङ्ग पहाड घर भइ हाल दाङ्ग लमही बस्दै आएका ५० वर्षीय घनश्याम खनाल छन् भने मृत्यु हुने एक-एक जना महिला र पुरुषको सनाखत भइसकेको छैन ।
अर्घाखाँची प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्टका अनुसार घाइते हुनेमा जीप चालक कपिलवस्तु, बुद्धभूमिका विरेन्द्र श्रेष्ठ, भूमिकास्थान–१०, धनचौरका उमेश रेग्मी, दाङ्ग लमही–५ की अनिता खनाल, बिन्दु खनाल, भूमिकास्थान–१० की सिमा रेग्मी र उनका १ वर्षीय छोरा आदित्य रेग्मी रहेका छन् । घाइतेमध्ये चार जनालाई उपचारको लागि चौराह अस्पताल बुटवल ल्याइँदैछ ।
जीप ओरालो सडकमा अनियन्त्रित भई सडकदेखि साढे तीन सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । गाडी ‘ब्रेक फेल’ भएर दुर्घटना भएको चालक श्रेष्ठले बयान दिएका छन् ।
घटनस्थलमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यलयका डीएसपी विष्ट, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधब रेग्मी लगायतले घाइतेको उद्दार गरेका थिए ।
अर्घाखांचीको नरपानीमा भएको जीप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुलेको छ । उक्त दुर्घटनामा परि दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ५ का ५१ वर्षिय घनश्याम खनाल र उनकी श्रीमती ४६ वर्षिय श्यामकला खनाल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखांचीले जनाएको छ । घाईतेहरु मध्ये उनिहरुकै दुई छोरी छन् ।
मृतक दम्पत्तीका दुई छोरी १६ वर्षिय विन्दु खनाल र १२ वर्षिय अनिता खनाल घाईते रहेको र उनिहरुको सन्धिखर्कमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा पठाईएकोे जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखांचीका प्रहरी नायब उपरिक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट अर्घाखांचीको सन्धिखर्क जांदै गरेको उनीहरु सवार लु. १ ज ४३२९ नं. को स्कार्पियो जीप सन्धिखर्क नगरपालिकाका वडा नं. ६ रातामाटा स्थीत साङखोलामा दुर्घटनामा परेको थियो ।
खनाल परिवार अर्घाखांचीमा रहेको आफ्नो पूख्र्यौली थलोमा दशैं मनाउन जांदै थिए । दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका अन्दाजी २५, ३० वर्षका युवाको भने पहिचान खुल्न सकेको छैन । चालक सहित ९ जना सवार उक्त जीप ओरालो सडकमा अनियन्त्रीत भई सडकदेखि तिनसय मिटर तल खोल्सामा खसेको थियो । दुर्घटनामा परी जीपका चालक कपिलवस्तु बुद्धभूमीका विरेन्द्र श्रेष्ठ सहित अन्य चार तिनजना यात्रु सामान्य घाईते छन ।